> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si Nexus 7
Ebe ọ bụ na mmelite nke Android 4.4 KitKat, nza nke Nexus 7 nwe na-ka na-eche na-enweta update ozi ọma n'ihi na ha Nexus 7 mbadamba. Agbanyeghị, Google ga-emecha ka KitKat abịa onye ọ bụla na-eji Nexus 7. Ya mere, ọ dịghị echegbu onwe ya, na oge dị nnọọ nso. Ebe a, ka okwu banyere ọnwụ nke photos na Nexus 7.
Gịnị ka i kwesịrị ime mgbe ị na-ehichapụ foto na Nexus 7?
Photos ndị mara mma dị oké ọnụ ahịa, karịsịa ndị na i were maka ụfọdụ oge. Mgbe ị na mmadụ na mberede ehichapụ ha na Nexus 7, ị na-adịghị mkpa ata onwe gị ụta otú ike, na-achọta a mkpebi kama.
Mbụ na mkpa: Kwụsị na iji Nexus 7 ozugbo mgbe adịkwa foto. Ọ bụla ọrụ na ngwaọrụ nwere ike n'ịwa ọhụrụ data, na ọhụrụ data nwere ike overwrite na-ehichapụ foto na-eme ka ha agaghị ekwe omume n'ihi mgbake.
Nke abụọ: Chọta a Nexus 7 foto mgbake ngwá ọrụ na-amalite na-eme a mgbake ozugbo o kwere omume. Ị ka nwere oké ohere iji weghachite ehichapụ foto site na a Nexus 7 tupu ha na-overwritten. Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) pụrụ ịbụ mma nhọrọ, ọ bụrụ na ị nwetara otu.
Ime ya ugbu a: naghachi ehichapụ foto site na Nexus na 3 nzọụkwụ
Kwadebe ọrụ: ibudata ikpe mbipute nke Nexus 7 foto mgbake software for free n'okpuru.
Cheta na: Nke a Nexus 7 foto mgbake-enyere gị aka naghachi data karịa photos. Ị nwekwara ike iji ya na-agbake furu efu videos, music na ndị ọzọ na akwụkwọ Ị na-azọpụta na Nexus 7 na ndị ọzọ na ndị ọzọ Android ngwaọrụ (ele ndepụta nke na-akwado na ngwaọrụ na Android ebe a).
Nzọụkwụ 1. Kwado USB debugging na gị Nexus 7
Nke a nzọụkwụ dị mkpa maka niile Nexus 7 mbadamba. Ọ bụrụ na ị na-ama nyeere ya, ị nwere ike na-awụlikwa elu ka nzọụkwụ ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, i nwere ike ime ya ugbu a. Ọ ga-obere dị iche iche maka idebe ya na Nexus 7 mbadamba na-agba ọsọ dị iche iche na Android nsụgharị.
N'ihi na Android 3.0 4.1: Gaa Ntọala <Mmepụta nhọrọ <Lelee USB debugging N'ihi Android 4.2 ma ọ bụ ọhụrụ: Gaa Ntọala <Banyere ekwentị <Kpatụ Mee nọmba ruo ọtụtụ ugboro ruo mgbe na-a dee Ị bụ n'okpuru Mmepụta mod <Back to Ntọala <Mmepụta nhọrọ <Lelee USB debugging
Nzọụkwụ 2. Launch usoro ihe omume na ike iṅomi gị Nexus 7
Mgbe enyere USB debugging, na-agba Wondershare Dr.Fone for Android na kọmputa gị na-enweta Nexus 7 mbadamba ejikọrọ. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ị ga-ahụ na windo nke usoro ihe omume dị ka ndị a. Pịa na Malite button na-amalite ịgụ isiokwu gị Nexus 7 maka ehichapụ photos ugbu a.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake foto gị Nexus 7
Usoro ihe omume rụrụ a miri emi Doppler na gị Nexus 7. ​​Ozugbo ọ na-akwụsị, ị nwere ike ihuchalu niile hụrụ data na gị Nexus 7, gụnyere ehichapụ photos. Ego na udi nke Gallery na nne Mmetụta ihe ị chọrọ. Wee pịa na Naghachi button, na i nwere ike ịzọpụta gị niile ehichapụ photos na Nexus 7 na otu Pịa.
Rịba ama: Mgbe ha n'otu oge, ị nwekwara ike naghachi ndị ọzọ faịlụ mgbe i nwere mkpa. N'ihi na ndị ọzọ Android ngwaọrụ ọrụ, ị nwere ike na-ele ndepụta nke na-akwado ngwaọrụ ebe a iji lelee ma ọ bụrụ Wondershare Dr.Fone for Android na-arụ ọrụ maka ngwaọrụ gị.
A na-enye aka n'ihi na gị? Ntak ibudata ikpe mbipute n'okpuru maka free inwe a na-agbalị ugbu a?
The Best Way ka mgbọrọgwụ ndị Samsung Galaxy Ace S5830